Accueil > Gazetin'ny nosy > Soaly, Mpisoloky sady mpangalatra: Miafina any amin’ny mpitondra ambony ?
Soaly, Mpisoloky sady mpangalatra: Miafina any amin’ny mpitondra ambony ?
Tranga mpiseho eo anivon’ny fiaraha-monina ny fisolokiana sy hosoka mbamin’ny halatra. Tsy voatery ho jiolahy na olon-dratsy araka ny mahazatra no mahavanona izany fa ny toe-tsaina simba koa dia mety hitarika ho amin’izany. Iray amin’izany ny zavatra nataon’i Soaly na i Victorien Joseph Esoal.
Raha ny fisehon’ny raharaha no ifotorana, ny talata faha 27 martsa teo, tamin’ny dimy ora sy sasany hariva no nitranga teny Analamahitsy Ambodimanga ity halatra sy fivadiam-pitokisana nataon’i Soaly.
Tsikaritr’i Soaly mantsy tamin’izay fa lasa daholo ny tao an-trano dia nalainy tao anaty valizy ny vola maherin’ny 60 tapitrisa ariary. Vola nokasaina hitsaboana tena tany ivelany izy io, ary fantatr’i Soaly tsara izany. Norovitiny ilay valizy nitoeran’ny vola ary nampidiriny tao anaty kitapo babena ireo vola ary lasa izy nandositra tsy hita hatramin’izao.
Raha ny akom-baovao moa dia nisy olona nahita ny nialany tao an-trano dia tsy iza fa ireo mpiara-monina izay nipetrapetraka teo ivelan’ny vavahady. I Soaly moa dia naira-nipetraka tao an-trano nandritra ny 3 taona ka efa nanana fitokisana sy mahalala tsara ny zava-misy rehetra ao an’trano.
Rehefa nokarohina ny entany tao an-trano izay mbola tavela tao daholo dia nahitana rongony 7 fonosana sy karazana ody gasy. Ny ampitson’io andro io izy dia nandefa hafatra na « message” tamin’ny findain’ireo tompon-trano, ka nombam-pandrahonana izany. Raha ny filazan’ireo tompon-trano very vola dia tsy ny laharan’ny findain’i Saaly no nampiasainy fa laharana hafa tamin’io.
Ny ampitso alarobia ireo tompon-trano voaroba vola no nanatona ny mpitandro filaminana tao amin’ny boriborintany faha 8 nametraka ny fitoriana.
Efa mandray an-tanana ny raharaha moa ny pôlisim-pirenena manao ny fikarohana, ary efa nametraka peta-drindrina amin’ny toerana maro, hatrany amin’ny toeram-pivavahany amin’ny maha-mpino silamo azy. Ny dikan’izany dia miangavy izay mahita na manana vaovao momba an’i Soaly ny mpitandro ny filaminana mba hiantso ny manam-pahefana miandraikitra ny raharaha amin’ireto laharana ireto: 034 05 998 42 na 034 05 998 41.
Ny re aloha dia toa efa mizahozaho any ambadika any amin’ny alalan’ny hafatra (message) ihany koa izy fa tsara antoka ny toerana misy azy satria toa tompon’andraiki-panjakana ambony. Tetika hilazana ve izany fa ho sasa-poana ny mikaroka azy fa tsy marina velively? Manana andraikitra hampahafantatra ny misy azy koa ny olona nampiantrano azy raha izany fa isan’ny olo-meloka raha tonga ny fotoana hivoahan’ny marina.